Conte oo sharraxay midka Adag in la ciyaaro Champions League iyo Premier League, yuu ku Sheegay kan Adag? – Gooldhalin
Conte oo sharraxay midka Adag in la ciyaaro Champions League iyo Premier League, yuu ku Sheegay kan Adag?
Tababaraha reer Talyaani ayaa sheegay in Horyaalka Dalka England iyo Champions League uu adagyahay koobka Horyaalka England.
Conte ayaa Shirkiisii Jaraa’id ee Jimcaha sheegay: “Waxaan u maleynayaa iney sidaas tahay, horyaalka, waxaad ciyaari doontaa 38 kulan, si aad u hanato horyaalka waa inaad guulo gaartaa. Sanadka aad ugu waxqabad fiicantahay waad guuleysan doontaa.
“Koobka Champions League, marka aad gaarto wareegga 16-ka keddib waa 8da Afarta iyo Final- waxaad wajihi kartaa Natiijo wanaagsan iyo mid Liidata labadaba – Waxaan u maleynayaa in hanashada Champions League ay tahay haddii aad Nasiib badantahay waad Badin doontaa.
“Waa inaad wanaagsantahay, balse mararka qaarna waa inaad nasiib badantahay. Hal go’aan oo garsoore ayaad ku hari kartaa ama kusii joogi doontaa. Horyaalka, in ka badan 38 kulan, kooxda kaliya ee u qalanta in ay hanato ayaa hanan doonta.
“Nasiibku Tartan walba muhiim ayuu u yahay, balse marka ay suuragal kuu tahay in aad ciyaarto 38 kulan haddana aad badiso inta badan. Koobka adigaa heli doona, sida FA Cup ama EFL Cup xataa Champions League ama Europa League, dhammaan maahan kuwo xoog badan.”
Previous Previous post: Liverpool iyo Chelsea oo diyaar u ah inay £ 50m ku doonayaan xiddiga Wilfried Zaha.;
Next Next post: Inter oo ku dhawaaqday qiimaha lagu iibsan karo laacibkeeda Brozovic